'La Casa de Papel 5' - Fahombiazan'ny Netflix izay mifarana | Bezzia
Susana godoy | 07/09/2021 14:00 | ankehitriny
Ny fizarana vaovao an'ny 'Ny taratasy taratasy 5'. Vanim-potoana vaovao mizara roa. Matetika io dia rehefa mahatratra ny valiny farany ilay andian-tantara satria toa izany ny tranga. Saingy mandritra izany fotoana izany, ny Netflix indray no sehatra nisafidy noho ny fahombiazan'ny andiany toa an'io.
Na dia fantatsika tsara aza, tsy teraka tao aminy fa sambany hitantsika tao amin'ny Antena 3. Fa marina tokoa fa ny fitsambikinana tamin'ny lampihazo dia nahafahan'ny olona an-tapitrisany nanandrana azy ka lasa ilay fisehoan-javatra ao anatiny sy ivelan'ny sisintanintsika izay tena izy. Efa hitanao ve ireo toko 5 voalohany?
1 Nizara roa ny 'La Casa de Papel 5'
2 Ny vanim-potoana vaovao an'ny La Casa de Papel
3 Hisy ho avy ve ny La Casa de Papel?
Nizara roa ny 'La Casa de Papel 5'
Ela ny dia, miaraka amin'ny fandraisana anjara marobe sy ny fanaovam-beloma farany, toy ny mahazatra. Saingy tonga tamin'ny vanim-potoana fahadimy tamin'ny andiany iray izay toa iray ihany. Araka ny efa nolazainay, ireo mpihetsiketsika manao akanjo miloko mena ary ny sarontava nataon'i Dalí dia nanjary olo-malaza be tao anatiny sy ivelan'ny firenentsika. Fa marina fa ny tantara tsara rehetra dia tsy maintsy mifarana ihany koa araka ny fantatsika. Na dia maharary antsika aza izany dia marina fa mendrika ny fiafaran-endriny izy ireo. Noho izany Tamin'ny 3 septambra, navoaka ny fizarana 5 voalohany amin'ny fizaràna 5 ary ny 5 hafa dia ho tonga amin'ny Netflix amin'ny 3 Desambra. Eny, amin'ity taona ity dia hatsahatra ny andiany.
Ny vanim-potoana vaovao an'ny La Casa de Papel
Tsy hanao mpandroba koa isika satria efa fantatsika izay mitranga, noho izany dia holazainay ihany fa taorian'ny fizarana farany tamin'ny vanim-potoana fahefatra dia nilainay haingana indrindra ny fahadimy. Marina fa tamin'izany fotoana izany dia maro ny teoria momba ny hoe ny fahefatra no ho farany. SAINGY Ny famelana ireo tabilao marobe eny amin'ny habakabaka angamba nanome antsika ny famantarana fa ho avy ny fahadimy ary tonga.
Saingy tonga amin'ny tanjona roa izy io ary toa naniry hanome zavatra bebe kokoa tsy nandrasan'ny mpanatrika i Álex Pina. Satria na dia mizara roa aza izy io dia marina fa ny saika tsy voavaha dia saika hatao amin'ny tapany voalohany. Ankoatr'izay, rehefa mivoaka ny toko 10 amin'ny fotoana iray dia efa fantatry ny besinimaro na mazava ny toerana hanombohan'ny famahana ny tsy fantatra. Marihina fa ny tapany faharoa amin'ny 'La Casa de Papel 5' dia manome lanja bebe kokoa ny fientanam-pihetseham-po amam-panahy ary amin'izany dia afaka mifandray mivantana amin'ny veloma izy.
Hisy ho avy ve ny La Casa de Papel?
Amin'izao fotoana izao, ireo mpankafy rehetra izay tsy te hifarana ilay andiany, dia manomboka mandinika safidy vaovao. Nisy ny resaka izay mety haka ny toeran'ny olona sasany ary mety hisy andiany vaovao mifototra amin'izany na angamba, taona maro taty aoriana, hiverina amin'ny fiandohana tahaka izay niseho tamin'ny lohateny maro hafa izay efa fantatsika. Amin'izao fotoana izao, mila mandamina fizarana 10 isika, izay araka ny filazantsika dia mizara roa.
Ity fizaran-taona ity dia nanana rakipeo sarotra kokoa, noho ny krizy Coronavirus ary koa satria maharitra iray ora ny toko tsirairay, midika izany fa nitatra kely kokoa izy io. Anisan'ireo seha-pifaneraserany ananantsika i Danemarka, ary koa Espana ary Portugal. Izy io dia iray amin'ireo vanim-potoana manaitaitra indrindra amin'ny lafiny rehetra. Satria ny fametrahana ny tarika ary na ny The Professor dia saika hatramin'ny fetra. Ankoatry ny filokana amin'ny endri-tsoratra vaovao sy ny fanidiana izay mikendry ny ho farany famitana. Azo antoka fa hanao izany izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » 'La Casa de Papel 5': Ny fahombiazan'ny Netflix